I-RudderStack: Zakhele Ipulatifomu Yedatha Yekhasimende Lakho (CDP) | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Okthoba 16, 2020 NgoLwesine, ngo-Okthoba 15, 2020 Douglas Karr
I-RudderStack isiza amaqembu obunjiniyela bedatha ukuthi abambe inani elikhulu kusuka kudatha yamakhasimende, ngeCustomer Data Platform (CDP) eyenzelwe ngqo onjiniyela. I-RudderStack iqoqa idatha yenkampani kuyo yonke indawo ethintwayo yamakhasimende - kufaka phakathi amasistimu wewebhu, amaselula, kanye ne-backend - futhi ayithumele ngesikhathi sangempela ezindaweni ezingaphezu kwama-50 ezisuselwa emafini nakunoma iyiphi indawo yokugcina idatha enkulu. Ngokuhlanganisa nokuhlaziya idatha yamakhasimende abo ngendlela yobumfihlo nokuphepha, izinkampani ziyakwazi ukuyiguqula ibe yizenzo zebhizinisi kuyo yonke imisebenzi yazo.
Ama-CDP wendabuko azamile ukuxazulula ukuqoqwa kwedatha nokwenza kusebenze, kodwa ngeshwa, iningi lawo lenza inkinga ibe yimbi ngokwengeziwe ngokwenza amasela wedatha angeziwe nezikhala zokuhlanganisa. Onjiniyela bedatha bavame ukuzithola bebhajwe phakathi, kuphela basebenzise amandla wamathuluzi afana nawo Snowflake futhi DBT ngoba ezinye izinto zesitaki azihlanganisi nokuhamba kwedatha kwazo okukhudlwana.
I-RudderStack ibeka abathuthukisi, amathuluzi wabo abawathandayo, nezakhiwo zesimanje phambili nasenkabeni, kusiza onjiniyela bedatha nezinkampani zabo ukuthola amathuba amasha anamandla ngendlela abaxhuma ngayo lezi zinhlelo ezibucayi futhi bazisebenzise kuyo yonke inhlangano.
I-RudderStack Cloud: Indlela Entsha Yesitaki Semininingwane Yekhasimende Lakho
Enye yezinkampani zokuqala ukuthuthela eRudderStack Cloud yi- Okubaluleke kakhulu, ipulatifomu yemilayezo evulekile nomthombo wokubambisana owakhelwe izindawo ezinokwethenjelwa okuphezulu. Le nkampani isingatha inani elikhulu lemininingwane eyenziwe amakhasimende ayo ebhizinisi futhi yakhe ingqalasizinda yayo ye-CDP kumathuluzi wamanje, kufaka phakathi i-Snowflake, i-DBT, neRudderStack Cloud.
Nge-RudderStack Cloud, sisuse imikhawulo kuvolumu yomcimbi futhi singathumela yonke idatha esiyifunayo ku-Snowflake. Singakwazi ukuhlaziya futhi sisebenzise yonke leyo datha ebalulekile yamakhasimende, futhi ekugcineni sibe ibhizinisi eliqhutshwa yidatha. ”
U-Alex Dovenmuehle, iNhloko ye-Data Engineering, iMattermost
I-RudderStack Cloud yenza kube lula ukuthi onjiniyela bedatha baqoqe, baqinisekise, baguqule, futhi bahambise idatha yamakhasimende endaweni yabo yokugcina impahla, izinsizakalo zokusakaza zesikhathi sangempela, kanye nezinhlelo zokusebenza zefu ezisetshenziswa amaqembu enkampanini yonke. Amaphuzu avelele afaka:
Ifu Lamanje - Yakhelwe ngaphakathi Kubernetes Okomhlaba owazalelwa ngamafu, ogxile esikalini esedlulele nokubekezelelana kwamaphutha, ngezisekelo zomthombo ovulekile, ukwakheka kobumfihlo kuqala, kanye nethuluzi eligxile kunjiniyela ukwenza kube lula ukuhlanganisa umkhiqizo kwisitaki sakho esivele sikhona, ngenkathi kugcinwa kulula ukusetshenziswa lokho iza nefu SaaS.
Idatha Warehouse Centric - I-RudderStack Cloud ikuvumela ukuthi uguqule indawo yakho yokugcina impahla ibe yi-CDP enezici ezifana nokuvumelanisa okulungisekayo, okuseduze nesikhathi sangempela, kanye ne-SQL njengoMthombo, oguqula indawo yakho yokugcina izinto ibe ngumthombo weRudderStack.
Unjiniyela Kuqala - URudderStack ukholelwa ukuthi isitaki sedatha yamakhasimende kufanele sibe ngethimba lobunjiniyela, yingakho umkhiqizo wethu uhlala unjiniyela kuqala futhi uhlangana namathuluzi asevele ewasebenzisa futhi ewathanda.
I-RudderStack Cloud ingumkhiqizo wedatha yamakhasimende osebenza kahle kakhulu, ongabizi futhi oyinkimbinkimbi konjiniyela.
Bhalisela Isivivinyo Samahhala Sezinsuku eziyi-14
Tags: CDPIpulatifomu Yedatha Yamakhasimendeumabhebhanaifu lokuqondisa
I-Brand Playbook Yakho Yokuletha Isikhathi Samaholide Esiphumelelayo Sango-2020